How To Use Social Media - ဒုက္ခသည်များနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးများအတွက်သတင်းအချက်အလက် | USAHello
တစ်ဦး GED Get
ဂျော့ဘ် & အလုပ်အကိုင်များ
Fame ၏ USAHello ခန်းမ
ယောဘသည် Portal ကို
နိုင်ငံခြားရေးမှတ်တမ်း - အခြားတိုင်းပြည်များထံမှလွှဲပြောင်းခရက်ဒစ်
တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူ start ကိုဘယ်လို
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအပြောင်းအလဲ:application များအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခိုလှုံခွင့်၏ပံ့ပိုးပေးဖို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ
မည်သို့မှတ်ပုံတင်လက်ထောက်သွားဘက်ဆိုင်ရာဖြစ် - ဒုက္ခသည်များအတွက်ကောင်းသောလုပ်ခလစာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ & ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းဆယ်ပါးအလုပ်အကိုင်များ - နှင့်အကောင်းဆုံးလက်ရာလက်လီရောင်းချမှုအလုပ်အကိုင်များ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေး - ဘယ်လိုပြန်ကျောင်းကိုသွားကြဖို့
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ- နိုဝင်ဘာလ Update ကို 2018
နိုင်ငံခြားရေးမိတ္တူ - အခြားတိုင်းပြည်ကနေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်ပြောင်း
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ - updated ဒီဇင်ဘာလ 2018
အဘယ်အရာ USAHello စာသင်ခန်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်?
စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှု Disorder post (PTSD)
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ဂျော့စိုက်ပျိုးရေး
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ဂျော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
ဘယ်လိုလိမ့်မည် 2020 အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းငါ့ကိုထိခိုက်စေ?
အဆိုပါ DV ထီ (program ကိုမတူကွဲပြားမှုလူဝင်မှုဗီဇာ)
ထီ DV ။ (ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအစီအစဉ်။)
USAHello Give!လမ်းညွှန် kickoff ပါတီ
toggle menu ကို menu ကို
သင့်ရဲ့ TASC ဒီပလိုမာကိုရယူလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ HiSET ™ဒီပလိုမာကိုရယူလိုက်ပါ
အခမဲ့GED®့ Prep အတန်းအစား
ဆရာ, ဆရာမများအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ profile များကို
အလုပ်အကိုင်အ application များအတွက်အဖုံးစာတစ်စောင်ရေးထား
TPS နဲ့ DED
ပိုက်ဆံ & အခွန်
Social media is the term we use for the websites and applications that allow people to share their news and images and connect with other people. It isagreat way to stay in touch with family and friends, to network with employers and to learn about what is going on in the world. Here is some information on how to use social media safely and effectively.
How to use social media platforms
Here are some well-known social media platforms. Learn what they do and how to use them.
Facebook isafree website that lets its users connect with other users. သင်လုပ်နိုင်သည် like USAHello’s Facebook page. Facebook can beagood way to stay connected to your friends and family or other refugees who have resettled in different states or different countries. It is important to make sure you have strong privacy settings on your Facebook page.
Facebook isafree website that lets its users connect with other users. You can like USAHello’s Facebook page. Facebook can beagood way to stay connected to your friends and family or other refugees who have resettled in different states or different countries. It is important to make sure you have strong privacy settings on your Facebook page.
Facebook က 101 from GCFLearnfree.org
Facebook 101 from GCFLearnfree.org
This course from the nonprofit organization GCFLearnfree.org teaches you basic information about what Facebook is, how to adjust your privacy settings, and how to createaFacebook page.
Instagram is an app for sharing pictures. and videos. It is very popular with young people.
Instagram ကို 101 from GCFLearnfree.org
Instagram 101 from GCFLearnfree.org
This course fromanonprofit organization teaches you how to create an Instagram account and gives you tips for sharing photos and videos.
LinkedIn is the most popular online networking site to help people find jobs in the United States. Your LinkedIn “profile” is basically just your resume. HavingaLinkedIn profile can help you advance in your career.
LinkedIn တို့ 101 from GCFLearnfree.org
LinkedIn 101 from GCFLearnfree.org
This course fromanonprofit organization teaches you how to createaLinkedIn account and how to look for jobs on LinkedIn. You may not want your profile to show too much personal information. The course will help you set the page to suit your needs.
Skype isaprogram that lets users make free calls from one computer to another computer all around the world.
Skype from GCFLearnfree.org
This course from the nonprofit organization GCFLearnfree.org teaches you how to use Skype to make free phone calls onacomputer. The course will show you how to set up your own Skype account.
Twitter isa“micro” networking site. Users make profiles and then can post very short sentences about information that is important to them. Many people use twitter to discover new things or what is going on in the world. သင်လုပ်နိုင်သည် follow our Twitter account.
Twitter isa“micro” networking site. Users make profiles and then can post very short sentences about information that is important to them. Many people use twitter to discover new things or what is going on in the world. You can follow our Twitter account.
တွစ်တာ 101 from GCFLearnfree.org
Twitter 101 from GCFLearnfree.org
This course from GCFLearnfree.org teaches you how to set upaTwitter account, who to follow and how to tweet.
Stay safe on social media
ဒီစာမျက်နှာအကူအညီနဲ့သငျသညျပွုခဲ့? ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ
သုံးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးပါ. သင့်ရဲ့အဖြေကိုအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဘယ်လိုဤ website ကိုသင်ကူညီပေးခဲ့?
အဘယ်အရာကိုဤ website အကြောင်းသင့်အရှိဆုံးနဲ့တူကြဘူး? သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်သတင်းအချက်အလက်တွေရေးပါ.
သငျသညျအဘယျသို့တိုင်းပြည်များမှ? သင်ပိုမိုမေးခွန်းများကိုမေးရန်ကိုအသင့်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါ. ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ပိုပြီးအကူအညီပူဇော်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်.
သင်ဤ website ကိုသင်၏ဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ဆိုနှင့်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဘာသာနှင့်သင်၏အင်္ဂလိပ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်.
P.O. သေတ္တာ 15167
လက်ပံ, OR 97293
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာ sign up ပြုလုပ်ပါ!
ငါဖတ်ပြီးပါပြီ သီးသန့်လုံခြုံရေးအင်ဖို နှင့်ထံမှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိရန်သဘောတူ USAHello.
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ
မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ USAHello Share
သင်သာအင်္ဂလိပ်၌ဤ website ကိုဖတ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်သင်သင့်ဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ကဖတ်နိုင်သည်.
အဆိုပါခေါင်းစဉ်အပေါ် menu ကနေသင့်ဘာသာစကားပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
ဒီ button ကိုရှာဖွေပါ!
အင်္ဂလိပ်အကြားအကူးအပြောင်းဤခလုတ်ကိုသုံးပါ, သင်၏ဘာသာစကား, နှင့်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဘာသာ.
The Refugee Center Online ယခု:
USAHello ဘာသာစကားမြားစှာအခမဲ့အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတန်းကိုထောက်ပံ့ပေး. ဒါဟာအားလုံးနောက်ခံအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့ဖြစ်၏. USAHello မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
GED®ပညာရေးအပေါ်အမေရိကန်ကောင်စီကပိုင်ဆိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးလိုင်စင်အောက်မှာ GED စမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု LLC တို့ကအုပ်ချုပ်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, အလည်အပတ် gedtestingservice.com